Mitady an'i Hery Lanja
Date: 27 avril 2015 - 22:10
Iangaviana izay mahafantatra an'i Soloherilala Lanjafitiavana mba hampita azy ity hafatra ity na koa manome hevitra mba ahafahako mifanantona aminy.
Mpinamana izahay fa ela tsy nifankahita.
Tao Marseille no nifankahitanay farany.
Misaotra ny rehetra manome valinteny matotra
Re: Mitady an'i Hery Lanja
Date: 10 juin 2015 - 19:20
Izany hono e
Date: 11 juin 2015 - 16:21
tsy haiko na ilay Hery fantatro zany,tsy haiko ny tena anarany feno fa fantatro hoe otrotrzao. Mbola ao Marseille ihany izy,marié 2 enfants
Date: 11 juin 2015 - 23:46
Misaotra anao, lava volo ilay Hery namako t@ izahay nihaona farany, mpanao sary izy taloha, very ny numero phone dia mitady azy mafy aho izao.
Koa raha ilay Hery fantatrao io dia mba asaivo miditra eto izy azafady raha mety.